Lenovo A7, njedebe dị ala abanyela na Google Play Console | Gam akporosis
Lenovo Ọ bụ onye na-emepụta China nke na-anaghị ebuputakarị smartphones ugboro ugboro. Ya mere, katalọgụ ya pere mpe, mana nke ahụ bụ n'ihi na ọ na-arụ ọrụ karịa n'ike n'ọtụtụ alaka ndị ọzọ, na otu n'ime ndị isi ya, nke ọ nọ na ya n'ahịa dị otú a, bụ nke kọmputa na ngwọta eletrik n'ozuzu ya.
Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ anaghị adịte aka na-ebuputaghị ụfọdụ mobiles yana, ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ ọ bụla na ya, ugbu a ọ na-ezube ime ka onwe ya nwee mmetụta na Lenovo A7, ọnụ ala arụmọrụ nke ga-arụ ọrụ n'oge na-adịghị anya karịa.
La Google Play njikwa ọ bụ nchekwa data nke na-edekarị ụdị smartphones dị iche iche na-abịanụ na ụfọdụ atụmatụ ha na nkọwapụta teknụzụ ha. Achọpụtaghị Lenovo A7 na-adịbeghị anya ma dabere na nso nso a.
Àgwà ndị e gosipụtara na tebụl na-egosi na nke a bụ ama ama dị oke ọnụ ma na-enye ihe ndị bụ isi maka ndị ọrụ na-akwadoghị. A na-ekwenyeghachi nke a mgbe anyị hụrụ na ihuenyo nwere mkpebi HD + - ikekwe pikselụ 1,520 x 720 - nke nwere ọkwa n'ụdị mmiri mmiri na ntakịrị bezel akpọrọ mkpọtụ a na-akpọ akpọ. Na nke a, anyị ga-agbakwunye na ọnụ ya na-akwado ikike nchekwa 2 GB nke RAM, nke na-eje ozi dị ka nkwado maka ikpo okwu mkpanaka Spreadtrum SC9863A.
Ndepụta ahụ kwuru nke ahụ A ga-enyekwa Lenovo A7 na sistemụ arụmọrụ gam akporo 9 achịcha ozugbo na igbe ahụ. O nwere ike ibata n’enweghị ụdị nhazi ọ bụla ị na-enye dị iche iche karịa ngwaahịa, mana nke a ka ga-ahụ.
Onweghi ihe a mara maka ubochi ya na ego ya, mana anyi n’atu anya na o ga eri ihe ruru euro 100 ma nye ya ihe kariri otu RAM na ROM. A ga-amata nkọwapụta nkọwapụta ndị ọzọ ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Lenovo A7 bụ ekwentị ọhụrụ na-ezube ịbanye n'ime ala dị ala na Spreadtrum SoC
Esi gụọ ozi WhatsApp na-enweghị emeghe chats
Redmi K30 Pro, flagship ọhụrụ na Snapdragon 865, bụ ọkwa ugbu a